Mihaona amin'ny saka tia Neva Masquerade | Noti saka
Ny saka Fandrefesana Neva Izy io dia totokely miaraka amin'ny fijery malefaka sy mamy toy ny an'ny Siberian; raha ny marina, ny mpandray anjara mavitrika dia ny lokon'ny loko an'ity iray ity. Biby tena malina izy io, mety ho an'ny karazana fianakaviana rehetra mitady namana mangina mba hikororohana matetika.
Ao amin'ny Noti Gatos no holazainay aminao inona no mampiavaka an'io volom-borona mahafinaritra io -ary tsy nilaza mihitsy hoe- ary ny fomba hikarakarana azy io hany ka tena faly aho.
1 Fiandohana sy tantaran'ny saka Neva Masquerade saka
4 Fikarakarana inona no ilain'ny Neva Masquerade?
5 Moa ve ny saka Neva Masquerade mamokatra allergy?
6 Ohatrinona ny saka Neva Masquerade?
7 Sarina saka saka Neva Masquerade
Fiandohana sy tantaran'ny saka Neva Masquerade saka
Ilay saka tsara tarehy Neva Masquerade dia saka saka iray monina amin'ny faritra misy ny renirano Neva, any Russia. Izy io dia karazany malaza any amin'ny fireneny, na dia eran'izao tontolo izao aza dia mahazo mpanaraka haingana. Ary iza izany, iza no mahatohitra ireo maso malefaka ireo?
Ny hany maha samy hafa azy amin'ny Siberia dia ny lokon'ny palitaony, izay colorpoint, miaraka amin'ny sofina, orona, rambony ary tongony miloko mainty kokoa noho ny sisa amin'ny vatana.
Milanja eo anelanelan'ny 4 sy 9kg ny Neva Masquerade dia saka an-trano antonony. Ny vatany dia hozatra, matanjaka ary arovan'ny volo matevina matevina. Telozoro ny loha, misy sofina mijoro sy maso manga.
Ny rambony dia lava, mirefy sahabo ho eo afovoan'ny vatany ihany. Fohy ny tongony fa matanjaka, natao hahafahana mivezivezy lavitra raha ilaina.
Manana androm-piainana 20-23 taona.
Saka izany tena tia sy tia fiaraha-monina Afaka miaina tsara ao an-trano miaraka amina zanaka izy. Izany dia milamina tokoaNa dia mila manao fanatanjahan-tena isan'andro aza ianao mba hahafahanao handoro ny angovo anananao.
Fikarakarana inona no ilain'ny Neva Masquerade?
Mila sakafo faran'izay tsara misy proteinina ho an'ny biby ianao (70% farafaharatsiny). Ilaina ny misoroka ny fanomezana sakafo misy serealy sy / na vokatra volo satria mety hiteraka tsy fahazakana ireo, satria tsy manana anzima ilaina ahafahana manararaotra azy ireo.
Ny feeder dia asaina feno 24 ora. Ny saka Neva Masquerade dia misakafo imbetsaka isan'andro, ka tsara kokoa raha manana sakafo ara-bola malalaka izy. Ho fanampin'izany, ho ahazoana aina kokoa ho an'ny fianakavian'olombelona ianao, satria tsy hiasa saina afa-tsy ny manampy sakafo ianao amin'ny maraina sy / na amin'ny tolakandro raha foana izany.
koa, ny biby dia tsy maintsy manana rano madio sy madio. Zava-dehibe foana izany, saingy mainka aza amin'ny fahavaratra raha avo ny mari-pana.
Isan'andro tsy maintsy kosehintsika amin'ny karatra izany hisorohana ny volo tsy hikorontana. Zava-dehibe ihany koa ny fanadiovantsika ny masony tsindraindray miaraka amin'ny fehiloha madio mando amin'ny fampidirana chamomile.
Amin'ny lafiny iray, zava-dehibe ny manala ny seza amin'ny fasika isan'andro, ary manaova fanadiovana tanteraka azy indray mandeha isan-kerinandro na indray mandeha isam-bolana arakaraka ny karazana fasika ampiasaina. Amin'io lafiny io dia tokony ho fantatrao fa ny fasika clumping, na dia somary lafo kokoa aza izy io dia maharitra ela kokoa noho ny mahazatra; Raha ny marina, raha miaina amina saka iray fotsiny ianao dia mety tsy mila manadio ilay boatin-fako indray mandeha isam-bolana fotsiny ianao.
Isan'andro mila maka fotoana hilalaovana aminy ianaoNa amin'ny tady, baolina vita amin'ny alim-pito, na miaraka amin'ny biby tototry. Soso-kevitra ihany koa ny hamelana azy hivoaka any an-jaridaina na patio raha fefy izy ireo ary / na manana karazana harato izay misoroka ny famoahana mba hahafahany mandeha.
Safidy iray hafa ny mampianatra azy handeha amin'ny fehikibo sy kofehy rehefa alika izy, araka ny fanazavanay ao Ity lahatsoratra ity. Fa mahaliana ihany ny hamoaka azy io hitsangatsangana raha mangina ny faritra ipetrahanao ary zara raha misy ny fifamoivoizana. Ohatra, amin'ny tanàna iray dia tsy tokony havoaka izy io, satria hahatsapa ho misedra setra sy matahotra mafy ilay biby.
Ny maha-karazany madio azy, izany hoe tsy namboarin'olona, ​​fa salama tsara. Indraindray izy dia mety harary, misy sery na gripa, toy ny saka rehetra. Raha sendra miahiahy ianao fa tsy salama dia ento any amin'ny mpitsabo biby.
Moa ve ny saka Neva Masquerade mamokatra allergy?
Amin'ny ankamaroan'ny tranga (manodidina ny 83%) tsia. Satria tsy mitovy amin'ny Siberia izy ary saka hypoallergenic ity, ny Neva Masquerade dia tena mahaliana ho an'ireo mijaly amin'ny allergy.
Ohatrinona ny saka Neva Masquerade?
Ny saka Neva Masquerade dia manana vidiny antonony 900 euros. Manoro hevitra izahay ny hahazoana azy io amin'ny satroka matihanina, satria amin'ity fomba ity dia azonao antoka fa salama ny volony ary nahazo ny fikarakarana ilaina izy. Eo koa no hanomezan'izy ireo anao ny taratasy fanamarinana ny tetirazanao ary ahafahan'izy ireo mamaly ny fanontanianao momba ny ray aman-drenin'ilay alika kely.
Sarina saka saka Neva Masquerade
Ankafizo ireto sary mahafinaritra an'ny Neva Masquerade ireto:
Sary - Cat-breeds-encyclopedia.com
Sary - Nobilpazzi.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Hihaona amin'ny saka be fitiavana Neva Masquerade